Ribhoni Fekitori - China Ribhoni Vagadziri uye Vatengesi
Ribhoni dzinoshandiswa zvakanyanya sechikamu chakakosha pamamedali. Ribhoni dzinogona kupihwa mune zvakasiyana zvinhu zvakaita se polyester, kupisa kupisa, yakarukwa, nylon uye nezvimwe.Zvinoenderana nesarudzo yemutengi uye kuti mucherechedzo uchave sei. Kana iyo logo iine iyo yadzima mavara, kupisa kwakachinjiswa lanyard anonyanya kusarudzwa kwete chete nekuti iwo wemakwikwi mutengo, asi nepamusoro payo zvakare nyoro. Iyo logo pane iyo polyester lanyard inowanzo silkscreen kudhinda kana CMYK kudhinda. Yakarukwa kana yenylon lanyard haiwanzo kusarudzwa uchitarisisa mutengo wayo wese. Saizi yakaenzana yemaribhoni i800mm ~ 900mm. Dzimwe nguva vatengi vanosarudza kureba kureba, kunogamuchirwa. Kunze kwezvinhu zvemaribhoni nemucherechedzo waro, chimwe chikamu chakakosha chemaribhoni ndiyo mhando yekusonesa. Kuti ubatane nemamenduru, zvinogona kuve V yakasonwa kana H kusona. H yakasonwa haidi midziyo yesimbi, nepo V yakasonwa inoda ringi reribhoni & kusvetuka mhete yekubatanidza ribhoni nemenduru. Iko kunaka kwekusona kwedu kunopedzwa nevashandi vedu vane ruzivo, izvo zvinogona kuve nechokwadi chehunhu hwayo hwekusona. Sezvo nyanzvi yekusimudzira chipo mupi, isu tinogona kupa iyo yese set zvigadzirwa kusanganisira kurongedza. Hazvina mhosva kuti tibatanidze isu kuti titenge maribhoni chete kana kutenga chigadzirwa chose kusanganisira menduru, ese ari maviri anotambirwa. Tiri pano kuzomirira kubvunza kwako.